4.6.20 MCS COVID-19 Dzokorora – Mason City Zvikoro COVID-19 Makavakuru
4.6.20 MCS COVID-19 Dzokorora
Tinoda kutora chinguva uye tizive kuoma kwazvakaita ichi chiitiko cheCOVID-19 ikozvino. Kune zvakawanda zvisingazivikanwe, uye zuva rega rega rinounza ruzivo rutsva.
Tarisa vhidhiyo iyi yevashandi vedu uye mhuri dzinogoverana izvo nepo isu tingave tisiri pamwe chete munyama, tichiri mune izvi pamwechete. Uye isu tichiri Mason.
Sezvazvino na2pm, hapana mhosva dzakasimbiswa dzeCOVID-19 muMason City Zvikoro, uye 4,450 akasimbisa nyaya muOhio. Pazasi pane mhinduro kumibvunzo yakajairika kubva kumhuri dzedu uye neruzhinji.
Ndakaverenga zvimwe zvine chekuita nezvezvimwe zvemapuratifomu epamhepo seZoom. Mason iri sei kuchengetedza vadzidzi pavanenge vari online?
Zvikoro zveMason City zvinotora kuchengetedzwa uye kuvanzika kwevashandi vedu nevadzidzi zvakanyanya. Lely, yakawanda Zoom misangano yakavharwa nezvisina kukodzera zvemukati. Isu tasarudzwa kuti tisashandise Zoom nevadzidzi vedu. Vadzidzisi vanogona kupa mikana yekubatanidza kuburikidza nehupenyu vhidhiyo kufona (Semuyenzaniso, kuburikidza neGoogle Kusangana) asi havazodiwi. Vadzidzisi vanogona zvakare kushandisa asynchronous vhidhiyo-based tekinoroji, seFlipGrid uye SeeSaw, kutaurirana nevadzidzi. Vashandi vedu uye vadzidzi vanoshandisa Google zuva nezuva, uye panguva ino yenguva tiri kusendama zvakanyanya pamatombo anoshandiswa kazhinji uye software nekuwedzera zvishandiso zvitsva. Isu tinoziva kuti hapana chishandiso chakakwana chemusangano wevhidhiyo, uye sevakuru tine zvido zvekuda.
Vabereki vanogona sei kuchengetedza vana pamhepo??
Yedu Inovandudza Systems Dhipatimendi rakagadzira an online mubereki kosi zvekuchengeta mwana wako zvakanaka online. Iyo kosi inosanganisira marongero ekuchengeta mwana wako akachengetedzeka panguva iyo yakabatana neinternet, kugovera sarudzo iripo yemaseti kumisikidza nguva uye kudzivirira yakatarwa nzvimbo, uye nekupa software sarudzo dzekuchengetedza mwana wako.
Ndakafunga kuti tave kubva kuchikoro neChishanu kweZuva Rekufunda Kwemunhu. Chii chirikuitika izvozvi?
Nekuti isu takave nekukanganisika kukuru uye kanenge vhiki Yekudzidza Kwemunhu nguva isati yatanga uye mushure meSvutugadziro Yetsiva isu tichichinjira kuenda kuKwekudzidzira Kudzidza, isu takatsanangura kuti zvingave zvakanaka kuti vashandi pamwe nemhuri varege kuva nerimwe zuva revadzidzi rarasikirwa nemamwe maitiro avo achangogadzwa. Izvo zviri kutaurwa, yedu Remote Kudzidza chiitiko chiitiko chirongwa asynchronous kudzidza, uye hazvitsvaki kuti vadzidzi vapedzise vakapihwa migove pazuva rakati kana nguva. Kana mhuri yako ichida kuwedzera kutwasuka, ndapota edza kudzidzisa kumwana wako(s).
Kugadzira Masks eVashandi veMMA: CDC parizvino iri kurayira maAmerican kuti vazvipire kupfeka jira rinokosha kana chivharo chechiso kumeso kana vabuda kunobatsira kudzikisira kupararira kweiyo coronavirus. Kana iwe uri munhu ane hunyanzvi uye uchida kubatsira kugadzira masks evashandi veMason City Chikoro vashandi, isu taizoda kuitora! Dzidza maitiro ekugadzira masks pano.
Ndatenda kune zvese zvamuri kuita kutsigira maWets edu!